ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Awiner Biotech Co. , Ltd.
Awiner Biotech ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။Hebei ပြည်နယ်၊ China-Shijiazhuang မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။မြို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပ္ပတိန်ပေကျင်းနဲ့နီးတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေတယ်။Awiner Biotech သည်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ မှိုများ၊ အပင်ကြီးထွားမှုနှုန်းထိန်းညှိခြင်းနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပိုးသတ်ဆေးများနှင့်အဓိကဆက်ဆံသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီ၊ ယီမင်၊ ယူကရိန်း၊ ရုရှား၊ ကာဇက်စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ မက္ကဆီကို၊ ဘရာဇီး၊ ပါရာဂွေး၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါ၊
အီရန်၊ ပါကစ္စတန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ရုရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့အတွက်ပြanalyနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များလည်းကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ရန်ဖောက်သည်နိုင်ငံသို့သွားပါမည်။
1.One Stop Assistant ဝယ်ယူပါ။
ပိုးသတ်ဆေး, ပေါင်းသတ်ဆေး, fungicide ....
2. ကွဲပြားခြားနားသောစက်ရုံများမှစျေးနှုန်းအားလုံးစုဆောင်းခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအရှိဆုံးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများပေး။ ဖောက်သည်များတိုင်းရာခိုင်နှုန်းရေတွက်စေရန်
၁။ ကုမ္ပဏီတွင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများရှိသည်။ ဖိအားမြင့်အရည် Chromatography၊
ဓာတ်ငွေ့ Chromatography, လေဆာအမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, တိကျမှန်ကန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချိန်ခွင်လျှာ, အစိုဓာတ်ကို Analyzer, etc
အကန့်အသတ်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်းခြင်းလွှမ်းခြုံမှုသည် ၁၀၀% သို့ရောက်ရှိသည်
၃။ ကုန်ပစ္စည်းညွှန်းကိန်းများသည် FAO နှင့်အခြားနိုင်ငံများ၏စံချိန်စံညွှန်းများသို့ရောက်ရှိသို့မဟုတ်ကျော်လွန်ပြီးတညီတညွတ်တည်းအကျိုးရှိသည်
5 products ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် SGS စာမေးပွဲကိုလက်ခံပါသည်။
ဖောက်သည်များတောင်းခံသည့်မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်များ၊ လက်ဆောင်များ၊ နမူနာများစသဖြင့် ၃. ချက်စစ်ဆေးသည်။
ဖောက်သည် - သတ်မှတ်ထားသောတတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်း
တင်ပို့ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးရန်အတွက် 1.SGS နမူနာ
၁. အဆင့်မြင့်တဲ့ဆဲလ်ဖုန်း (သို့) ကင်မရာကိုပြင်ဆင်ပါ။
ဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီးနောက်ဖောက်သည်များအားအီးမေးလ် (သို့) ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများမှပေးပို့ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုစည်းပါ။
သုံးစွဲသူများအားဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုသတင်းပို့ခြင်းများပြုလုပ်ရန်မိုဘိုင်း APP များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
၁။ အမှာစာပြီးသည်နှင့်နောက်လာမည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွေ့အကြုံ၊ ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများနှင့်ဖောက်သည်၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြရန်အကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ပါမည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှဤအမိန့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်အမြင်များနှင့်အကြံဥာဏ်များတင်ပြနိုင်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များကိုထောက်ပြ။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်လာမည့်တိုးတက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျေနပ်လျှင်နောက်ထပ်ပူးပေါင်းမှုကိုမျှော်လင့်ပါ
ဖောက်သည်သည်ဆိပ်ကမ်းရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုကောက်ယူသည့်အခါယိုစိမ့်မှုပြproblemနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်တာ ၀ န်ရှိသည်
ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆိပ်ကမ်းသို့ ၁၅ ရက်ကြာပို့ဆောင်ပြီးထုပ်ပိုးမှုသည်ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်တာ ၀ န်ရှိသည်
(ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စစ်ဆေးမှုစနစ်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုစက်ရုံမှမထွက်ခွာမီစစ်ဆေးပါမည်။ )
Captan 95% TC, 20% WDG Azoxystrobin, Bifenthrin 25g / ဌ EC, Carbofuran 97% TC, Cyproconazole 40% WDG, Amitraz 12.5% ​​EC,